Baaq ay soo saareen xubnaha Ururka USC/SSA ee magaalada Gothenburg ee Dalka Sweeden
October 27 2001 at 5:12 PM BAYDHABO PRESS
Ujeeddo: Baaq ururka USC/SSA Skandinavia
Ka dib markii ay shirki toddobaadlaha isugu yimaadeen xubnaha USC/SSA ee magaalada Gothenburg/Sweden taarikhda markay ahayd 20.10.2001. Shirkaasi waxaa telefoon is-maqal ah uga soo qaybgalay xubno kale ee deggan wadamada Skandinavia . Xubnaha waxay ka wada hadleen:
a). Weerarada kooxda CARTA ay caado ka dhigteen in ay ku soo qaadaan dad shacbi ah oo deggaan degaankooda, sida weeraradii ay ku soo qaadeen Ceel-Cirfiid, ujeedada ka dambaysana ay tahay barakicin la barakicinaayo dadka madaniga oo danyarta ah ee ku abtirsada USC/SSA ( Muddullood).
b). Kooxda CARTA dhaqaalihi magaca umadda soomalida ay ku soo heshay, lama gaarsiinin dadka masaakiinta ah ee deggan gobollada kala kedisan ee somaliya, balse waxay diyaarsatay oo maalgelisay ciidan Military ah si lagu caburiyo laguna xasuuqo dadka madaniga ah ee deggan gobolka Banaadir iyo nawaaxigiisa, kadibna ay u sii gudbaan gobollada kale sida Jubboyinka, shabeeloyinka, Bay, Gobollada dhexe, Puntland iyo ugu dambayn Somaliland.
Shirka inta uu socday waxaa lagu goàansaday in baaq ammaan iyo taageero ah loo soo jeediyo:Gudoomiyaha ururka USC/SSA Al-xaaji Muuse Suudi Yalaxaw iyo inta hawsha la wado sida geesinimada leh ay ugu qumeen in ay soo dhiciyaan xuquuqda siyaasadeed iyo mid deegaaneed ay leeyihiin dadka ku abtirsada USC/SSA (Muddullood).
Sidaas oo kale ammaan iyo boogaadin waxaan u soo diraynaa Guddoomiyaha Guddiga Siyaasadda ee Gobolka Shabeelaha Dhexe Mudane Maxamed Dheere sida uu ugu guulaystay nabadaynta gobolka shabellaha Dhexe iyo gurmadkii wax ku oolka ahaa uu u soo fidiyay walaalihiisa USC/SSA todobaadkii hore, markii militariga kooxda CARTA ay soo weerartay .
Ugu dambayn, waxaan ugu baaqayna kooxda Carta in ay joojiso weerarka iyo xasuuqa ay ku hayso dadyowga deggan gobolka Banadir iyo nawaaxigiisa, waxaana xussusinaynaa kooxda CARTA in taageerayaasha ururka USC/SSA ee jooga gudaha dalka iyo dibeddaba in aysan marnaba oggolaynin in magaalada Muqdishu ay noqoto magaalo laga abaabulo caburinta iyo xasuuqidda dadyowga kale ee deggan gobollada dalka Somaliyeed, sidii xilligi kacaanka 21 Oktobar oo hadda kooxda CARTA ku riyoonayso in ay soo celiso habkaasi. Military uma baahna magaalada Muqdishu.
Waxaan soo dhaweynaynaa habka ah is-maamul goboleed madax banaan, taariikhda ayaa qori doonto qof waliba kaalinta uu ka qaadato horumarinta gobolkiisa iyo midda somaliwaynba.
Xiriiriyaha ururka USC/SSA ee Skandinavia